SONATA-CANTATA: ကြောက်တတ်ဖို့ လိုပါသည်
"မှန်ကန်သော ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် အဓမ္မအင်အားစုများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို မကြောက်။ မတရားမှုများ ကျုးလွန်ရမည်ကိုသာ ကြောက်သည်"
ကိုဧရာ.. အင်အားဖြစ်စေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
too much! i will
come back and read it through soon.
i arrived from pauk's blog.
မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းတပုဒ်ပါပဲ… ကိုဧရာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ “ကြောက်တော့ကြောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် မျက်စိဖွင့်ပြီး ကြောက်ကြပါ” ဆိုတာ ဒီအဓိပ္ပါယ်ပဲပေါ့။
ဆရာအောင်သင်းကတော့ ဟောပြောပွဲတခုမှာ စာရိတ္တသတ္တိဆိုတာ….
မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်ဘဲနေရဲတဲ့ သတ္တိ”….လို့ ဆိုပါတယ်။
ခြုံငုံပြောရရင်တော့ ဟီရိသြတ္တပ္ပကို မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး ကျင့်ကြံကြဖို့ပါပဲ။ အဲဒီအရှက်နဲ့အကြောက်ဟာ “လောကပါလတရား” (သို့မဟုတ်) လောကကို စောင့်ရှောက်သောတရား ရယ်လို့ ခေါ်ဆိုကြောင်း မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲသည်တရားကို လူအများမစောင့်ထိန်းရင် လောကကြီးဘယ်လိုဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို အထူးတလည် ဥပမာတောင် ပေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဆရာ့စာတွေဖတ်ဖတ်ပြီး ကျွန်မတို့5th yr နဲ့final yr မှာ ဆရာစာသင်ခဲ့တာကို အမြဲပြန် သတိရမိတယ်… ကွန်ပြူတာဘာသာကို ကိုယ်နဲ့ အတော်အလှမ်းဝေးနေသလို ကြောက်လန့် နေတတ်တဲ့ ကျွန်မတို့ လို ခပ်ဖျင်းဖျင်းလူမျိုးတွေ ဆရာရဲ့ တိကျပြတ်သား အချိတ်အဆက်မိတဲ့ ရှင်းပြချက်တွေကြောင့် အောင်ဖို့ ကနေ အမှတ်များဖို့ ထိ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ၀င်လာခဲ့တယ်… ဟိုတနေ့ ကပဲ ဆရာရဲ့ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မပို့ စ်ကို ဆရာ့တပည့်ကျွန်မအမျိုးသားကို ပြောပြရင်း ဟိုးအရင် ဆရာစာသင်ခဲ့တာတွေပါ ပြောဖြစ်ကြတယ်… သူက ဆရာရဲ့ချက်ကျလက်ကျ ရှင်းပြချက်တွေကို ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အထိ မှတ်မိနေသေးတယ် (ကျွန်မက သူ့ လောက်တော့ မမှတ်မိဘူးလေ… 8-() ဆရာရေးတဲ့ စာတွေကလဲ အဲဒီလိုပဲ… တခါတခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှုန်ဝါးနေရာက ကြည်လင်လာအောင်၊ တခါတခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိမသာလိမ်မိနေရာက မလိမ်မိအောင်၊ တခါတခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလျော့ပေးအလိုလိုက်နေရာက စည်းကမ်းတကျထိန်းသိမ်းတတ်အောင် တည့်တည့်မတ်မတ် လမ်းညွှန်ပေးတတ်တဲ့ ဆရာ့စာတွေက တန်ဖိုးကြီးလွန်းလို့အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်လေးစားမိပါတယ်ဆရာ… ဆရာက ကျွန်မတို့ ကို ဒီဘလော့လေးနဲ့ စာတွေသင်နေတုန်းပါပဲ… ( မမသီတာရေ… ဟိုတနေ့ က ကျွန်မက ကြောက်တတ်တယ်လို့မမကိုပြောတာ ဆရာများကြားသွားလားဟင်… ဒီပို့ စ်က အတော်ထိတယ်… ဟိဟိ)
ကျမတော့ ဒီပို့စ်ကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ။ လူတိုင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ မကြောက်တတ်တာက မိုက်ရူးရဲတာပဲ။ ကြောက်တတ်ဖို့လိုတယ်။ မျက်စိဖွင့်ပြီး ကြောက်တတ်ဖို့လိုပါသည်။
အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား။
ဥာဏ်ဆိုတာက အကြောက်တရားရှိမှ ပေါ်လာကြတာထင်ရဲ့ နော်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ..
ကြောက်စရာကောင်းတာကိုပဲ ကြောက်တတ်ဖို့ သတိပေးတဲ့တွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
တန်ခူးတို့လို ကျောင်းတုန်းက ဆရာ့ တပည့် မဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် အခု ဘလော့ဂ်ထဲမှာတော့ ဆရာ့ တပည့် ဖြစ်နေပါတယ်နော်။
ဆရာရေးတာတွေကို အမြဲတမ်း သေသေချာချာ ဖတ်ပါတယ်။ အခေါက်ခေါက်ဖတ်ပြီး နားလည်အောင် ကြိုးစားပါတယ်...။
အခုလဲ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကြောက်တတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည် သွားပါတယ်။